XOG: Waa kee Musharaxa Dhaqaalaha ugu badan lagu bixinaayo ee ugu cad cad Xilka Gudoonka Golaha Shacabka? – XAMAR POST
XOG: Waa kee Musharaxa Dhaqaalaha ugu badan lagu bixinaayo ee ugu cad cad Xilka Gudoonka Golaha Shacabka?
By Mohamed Ahmed On Apr 22, 2018
Magaalada Muqdisho waxaa si xowli ah ugu socda loolanka iyo xod­xodashada loogu jiro codadka xubnaha baarlamaanka, iyadoo la filaayo in lagu dhawaaqo goorta ay dhacayso doorashada guddoomiyaha baarlamaanka Somalia.
Dhanka kale Taliyaha Hay’adda Nabad Sugida iyo Sirdoonka Soomaaliya [NISA],Xuseen Cismaan Xuseen oo loo yaqaan ‘Xuseen Calool­kuus’ ayaa isagana u ololeynayaa Mushuraxa Xaaji Cali Sh.
Maxamed Nuur, waxaana lagu xantamayaa in si hoose isaga warqabaan Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo murashaxaan ka dhigtay plan B, si hadii Maxamed Mursal uu codkii loo baahnaa u waayo, Xaaji Cali Sheekh Maxamed codka loogu shubo.
Xiisad dagaal oo u dhaxeysa Soomaalida iyo Oramada oo ka taagan deegaanka Mooyaale
Wararkii ugu dambeeyay ee doorashadda Gudoomiyaha Baarlamaanka